Madaxdii iyo shaqaalihii xafiiska Kastamka dekedda Muqdisho oo xabsiga loo taxaabay – Madal Furan
Hoy > Warka > Madaxdii iyo shaqaalihii xafiiska Kastamka dekedda Muqdisho oo xabsiga loo taxaabay
Madaxdii iyo shaqaalihii xafiiska Kastamka dekedda Muqdisho oo xabsiga loo taxaabay
Muqdisho (Madal Furan) – Waxaa xili habeenimo ah xabsiga la dhigay Madaxii Kastamka Canshuuraha ee Dekedda Muqdisho Axmed C/llaahi Samow, waxaa arrintaasi ku beegangtay kaddib markii maanta Ciidamada Booliska ay xireen kuxigeenkiisa iyo shaqaalaha xafiiskiisa.
Ciidamada Booliska ayaa horay baadigoob ugu hayey Sarkaalkan kadib markii laga waayey xafiiska uu ka shaqeeyo maadaama horayba xabsiga loogu taxaabay Ku-xigeenkiisa iyo shaqaalihii kala hawl geli jiray xafiiskiisa.
Axmed Samow ayaa la sheegay inuu maanta teegay Xarunta Dambi Baarista ee CID, halkaasoo galabta lagu xiray xubnaha kale ee maamulka canshuuraha Dekeda ka tirsan oo lagu soo eedeeyay musuq maasuq.
Axmed Samow oo la hadlay Idaacad ka mid ah kuwa maxaliga ayaa sheegay in uusan baxsad aheyn, isagoo xusay in maanta markii Ciidamada Booliska tageen xafiiskiisa uu ku maqnaa arrimo caafimaad, kaddibna uu ka war helay in kuxigeenkiisa iyo xubnihii kale ee la shaqeynayay la xiray, waxaana uu tilmaamay inuu diyaar u yahay inuu sharciga u hoggaansamo.
Mas’uuliyiinta Kastamka Canshuuraha Dekedda Muqdisho oo isugu jira Madaxa Kastamka, kuxigeenkiisa iyo lix kale ayaa caawa ku hoyanaya Xarunta dambi baarista CID, waxaana ku socda baaritaano la xiriira kiiska lagu soo eedeeyay ee musuq maasuq ku saabsan.
Dekedda Muqdisho ayaa ka mid ah ilaha dhaqaale ee dowladda, waxaana xafiiska Kastamka Canshuuraha uu ka mid yahay goobaha dakhli uruurinta ee lagu canshuuro alaabaha ka soo dego Dekedda.
War-murtiyeed aan cidna farxad gelin oo ka soo baxay shirkii Garoowe ee Isbahaysiga Madaxda Goboladda
Raysal Wasaare Kheyre oo ku soo wajahan Puntland